China Counterattack isityumzi kwemveliso kunye Factory | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
Iimpawu isityumzi ifuthe
1. Isakhiwo esikhethekileyo sesithathu se-vortex senza ubungakanani bokutya bube bukhulu, amandla emveliso makhulu kunye nemilo yamasuntswana emveliso ibengcono;
2. Isakhiwo se-rotor esilungiselelwe ngokufanelekileyo sinokunika umzuzu oqinileyo we-inertia kunye ne-hammer impembelelo yamandla, ukwenzela ukuba isivuno esityumkileyo kunye nesilinganiselo sokuchithwa kuphezulu;
3. I-hammer yohlobo lwe-anti-wear ekhethekileyo eyenziwe ngo-"C" ingagcina ubume bayo obungqongqo obungaguqukanga kumjikelo wobomi bonke kwaye igcine imeko yemveliso yokutya okuziinkozo kunye nokuzinza;
5. Isixhobo esikhethekileyo sokulungisa isando sokulungisa isando senza isitya seplate sizinze ngakumbi, silungele ngakumbi ukuhlahlela kunye nokudibanisa, kwaye siphucula kakhulu ukusebenza kakuhle;
6. Ukukhutshwa kokukhutshwa kwezixhobo kunokuhlengahlengiswa ngokuhambelana neemfuno zesayizi yeenkozo kunye nokuthambeka kwemveliso egqityiweyo;
7. Ixhotyiswe ngesixhobo sokuvula nokuvala se-hydraulic okanye izixhobo ezizodwa zokutshintsha iindawo ezinobuthathaka, eziguqukayo kwaye kulula ukuzisebenzisa.
Yondla ubungakanani bezibuko（mm）
Ubuninzi be feed feed mm
Amandla emveliso (T / h)
Amandla emoto KW
Egqithileyo Cone isityumzi
Okulandelayo: Umhlathi isityumzi